Atsimo Andrefana: simban’ny bibikely ny voly katsaka sy ny hasy | NewsMada
Atsimo Andrefana: simban’ny bibikely ny voly katsaka sy ny hasy
Par Taratra sur 22/07/2019
Manahy mafy ny tantsaha any amin’ny faritra Atsimo Andrefana manontolo noho ny fihanaky ny bibikely mpanimba voly katsaka sy hasy. Very hevitra ny mpamboly any amin’ny kaominina ambanivohitra maro, ravan’ny bibikely avokoa ny velaran-tany misy voly hasy. Efa mivarotra omby mihitsy ireo mpamboly ireo hividianana fanafody hamonoana izany bibikely izany, saingy tsy mety foana hatramin’izao. Hiteraka fahavoazana lehibe, mety ho tonga hatrany amin’ny kere, izany.
Zara raha hisy 4 000 t ny vokatra hasy amin’ity raha tokony hahatratra 25 000 t. Ny ataon’ny mpandraharaha lehibe izany fa ny mpamboly madinika, mety tsy hisy horaisina. Tsy misy fidiram-bola azo antenaina, araka izany. Misy amin’ireo tantsaha madinika ireo aza ny nindram-bola amin’ireny “microfinances” ireny, tsy fantatra izay ho tohiny. Ny katsaka indray, anisan’ny foto-tsakafon’ny mponina any an-toerana, manahy mafy izy ireo fa tsy hisy horaisina ihany koa.
Tokony ho efa fantatry ny mpikaroka ny hisian’ireo bibikely ireo, tokony ho efa niomana amin’izany izy ireo, indrindra amin’izao fiovan’ny toetr’andro izao. Koa miantso vonjy amin’ny minisiteran’ny Fambolena, ny fiompiana, ny jono ny mponina hijery vahaolana faran’izay haingana. Ny voly vary izao io, any Atsimo Andrefana ihany (lahatsoratra eo ambony), azo ambara fa mahabe fanantenana, satria eo ny Banky afrikanina momba ny fampandrosoana (Bad) mamatsy vola ny tetikasa. Ny voly katsaka sy ny hasy, hatramin’ny taona maro, foto-piveloman’ny olona any an-toerana, toa jerem-potsiny, angamba hiandrasana indray fanampiana avy any ivelany.